Mmekọrịta Delivra Cazoomi maka Netsuite na Microsoft Dynamics CRM
Anyị email ahịa onye nkwado, Delivra, ekwupụtala njikọta ya na ha abụọ Netsuite na Microsoft Dynamics CRM nyiwe tinye n'ọrụ Cazoomi.
Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere Cazoomi SyncApps®, ọ bụ ngwa igwe ojii mara mma nke na-eme ka data kọntaktị gị jikọọ n'ofe ego, ecommerce, ndị na-enye ọrụ email na / ma ọ bụ usoro njikwa mmekọrịta ndị ahịa. Maka ndị ahịa ụlọ ọrụ, ngwa Cazoomi dị oke ọnụ karịa mmepe dị mkpa. Youkwesighi ichegbu onwe gị banyere ụlọ ọrụ na-emelite njikọ ha… Cazoomi nwere!
E wezụga vidiyo jọgburu onwe ya :), Cazoomi na-egosi na ọ bụ ebe siri ike, egosipụtara nke ọma. Ọ dịkwa oke mkpa ka ndị debanyere aha gị ka dị ọhụrụ gafee nyiwe. Izipu ozi na CRM gị mgbe onye debanyere aha wepụrụ… ma ọ bụ nke ọzọ nwere ike ịre ụlọ ọrụ gị onye ahịa ma ọ bụ mebie iwu CAN-SPAM. Ọ dịkwa oke mkpa na listi ahịa gị ka ị na-edebe ọdụ data kọntaktị gị.
Tags: ngwacazoomiNdiaguMicrosoft Microsoftnetsuitemmekọrịta
Mee 24, 2012 na 12: 25 AM
Douglas, ahụrụ m okwu ahụ n'anya karịchaa, "E wezụga vidiyo ahụ dị egwu, Cazoomi gosipụtara na ọ bụ ezigbo usoro siri ike, egosipụtara", mana vidio a bụ n'ezie onye ọkwọ ụgbọ ala anyị # 1 maka SyncApps na Q1 na-enye onyinye ọzọ 100% qtr / qtr platform platform ọnụego.
Hụrụ ihe ederede na ekele otu nde n'aka anyị niile @cazoomi: ndị otu twitter.
ps: vidiyo kacha mma dị na saịtị docs anyị :) http://www.edocr.com/user/cazoomi
Mee 24, 2012 na 12: 49 AM
Chee echiche ole ị ga - abanye na vidiyo dị ukwuu?! 🙂 Naanị na-agba ume - enwere m obi ụtọ na ikpo okwu gị na ihe ị na-eme.